ONLF: Siyaasad Mise Siriq – Rasaasa News
Feb 22, 2018 Cabdi Iley, ethiopia, heshiis, Kenya, Ogaden, ONLF, Somali, somalia
Feb 22, 2018 – Wadahadalkii Saraakiisha Tigreega iyo xubno ONLF ah, Nairo ku dhex maray oo reebay waji gabax iyo Riyaale Xaamud oo yidhi “waysadii nagama jabin”.
Jabhada wadaniga xoraynta Ogadeeniya (JWXO) ama afka qalaad lagu yidhaahdo; [Ogaden nation liberation front (ONLF)], waa jabhad u dagaalanta gobanimada gabalka Somalida Ogadeniya.
ONLF, waxay aaminsantahay in tiirkeeda koowaad ee ay ku dhisantahay uu yahay gobonimo doon.
ONLF, waxay aaminsantahay ama tiirka labaad ee ay ku dhisantahay odhanaya gobonimadaas waa in lagu doonaa hanaan kasta oo lagu keeni karo “gobonimada”. “Gobonimadu waxay u baahantahay oo ay ku baxdaa dhiig” sida dhirtu ugu baxdo uguna baahantahay biyaha.
ONLF, waxay halgan xidhiidh ah oo aan taageero caalami haysan kula jirtaa Ethiopia mudo sodon iyo afar sano ah (34 sano). Ma jiro dal hub siiya, ma jiro dal dhaqaale siiya, ma jiro dal dhaawaceeda daawo siiya, iyada oo aan haysan intaas oo dhan ayey hadana wadaa halgan gobonimo doon ah. Taas macnaheedu waxaa weeye halganka shacabkaa leh, ONLF-na waxaa leh dadwaynaha Soomaalida Ogadeeniya.
Ethiopia, waa dalka labaad ee Africa tirada dadka ugu badan, lehna awood ciidan iyo mid dhaqaale oo fiican, wayna awoodi wayday in ay ONLF, ka adkaato, sababtuna waa niyada iyo ONLF oo xaq ku taagan.
Ethiopia, kolka ay kaga guulaysan wayday ONLF, ciidan iyo siyaasad midna, ayey marwalba samaysaa wadahadalo ay uga danleedahay khiyaano. Wadahadaladaasna waxay u martaa, dad aan micna keeni karin amaba aan fahamsanayn waxa ay ku dhisantahay Ethiopia. Jabhada dhaxdeeda waa laga heli karaa dad daalay, kuwa duqoobay, kuwa wax la siiyo iyo kuwa aanay ka dhaadhicin dastuurka ONLF. Odhaah Chinese ah baa tidhaahda “ hadaad wax baray, samee waxaad baratay, hadaadan samayn waxba ma aadan baran”.
Wadahadalkii ugu dambeeyey, February 12, 2018 ee ONLF iyo Ethiopia isugu yimaadeen Nairobi, Kenya, waxaa soo abla ableeyey Sheekh Ibraahin Maxmed Hussein. Sheekh Ibraahin Maxamed Hussein, wuxuu ahaa markii ugu dambaysay madixii ururkii Al Itixaad Al Islamiya oo 2010kii Ethiopia isu dhiibay, ka dib, kolkii ay ONLF, ku heshiin waayeen in ay la wada dagaalamaan Ethiopia.
Ibrahin baa u kala dab qaaday ONLF iyo madaxa Ismaamulka Soomaalida Ethiopia Cabdi Maxamud Cumar (Cabdi-Iley). Cabdi-Ileyna wuxuu u kala dabqaaday saraakiil Tigree ah iyo ONLF, wuxuuna kulankii ugu horeeyey ka dhacay Emaraadka carabta November 15, 2017.
Kulankaas, ONLF, waxaa lagu qanciyey in cida Ethiopia taladu ka go,odo tahay saraakiisha Tigreega, waxaana mudan in iyaga lala fadhiisto. Wadahadal dheer saraakiisha Tigreegu waxay sameeyeen balanqaadyo been ah, oo ah in waxa ay ayagu ku kula heshiiyaan ay dawladu yeeli.
Gudiga dhex dhexaadinta waxay ka koobnaayeen labo xubnood oo Kenyan Somali ah, oo iyaga laftigoodu aan fahamsanayn, horena uga qayb galay wadahadalkii 2012. Qolyahani waxay had iyo goor u arkayaan wadahadalka ONLF iyo Ethiopia xalin khilaaf siyaadadeed. ONLF-na waxay u aragtaa in haduu hadal hoos ka bilowdo uu ugu dambaynta kor tagi, wadahadal Ethiopia lalo galana uu Jabhada u yahay guul siyaasadeed.
Sheekh Ibrahin, wuxuu ahaa xubin kale oo dhex dhexaadineed, laakiin kuma magacownayn dhex dhexaadin. Waxaa la isa siiyey xubnaha qolo walba uga qayb galaya shirka. Dhinaca Ethiopia waxaa ONLF-ta loo gubiyey sadex sargaal iyo Cabdi-iley wayna aqabaleen, ONLF-na waxay Ethiopia ama saraakiisha Tigreega u gubiyeen afar xubnood wayna aqbaleen.
Qodobka ugu horeya ee ONLF lagu xidhay wuxuu ahaa saxiixa in aad ogoshihiin dastuurka Ethiopia wayna saxiixday.
Ethiopia waxay ONLF, waydiisatay goorta cod laga qaadi dadwaynaha, waxaana lagu yidhi: dastuurka ayuu ku jiraa qodobka aftidu waxaana samayn kara isla sanadkanba baarlamaanka degaankiina.
Labadan qodob ayaa ugu mudnaa; kuwa kale waxaa ka mid ahaa sida loo qaybsan dhaqaalaha, shidaalka, ku dhaqanka nidaamka dawlada wadaaga iyo in xisbi siyaasi ah ay samaystaan oo doorashada ugu soo horaysa ka qayb gala.
Intii uu shirku socday madaxwayne Cabdi-Iley wuu shaqaysanayey, wuxuu la yeelanayey kulamo joogta taageerayaasha ONLF, odayaasha iyo dadwaynah af iyo gacanba wuu ka hadlayey wuxuuna sameeyey balanqaadyo dhaqaale iyo jagooyinba.
Kolkii la soo gaadhay gabogabadii iyo saxiixi ayey ONLF, tidhi wasaarada arimaha dibada ee Ethiopia dad ka socdaa ha saxiixo. Saraakiishii Tigreegu waxay ugu jawaabeen cidiba nama ogayne Cabdi-Iley ha saxiixo. Kolkaas ayaa lagu kala kacay.
Gabre oo ka mid ahaa saraakiisha shirka uga ayb galayey dhinaca Tigreega, ayaa u yeedhay wixii uu Ogadeen saaxiib la ahaa ee masuuliyad hayey, wuxuuna yidhi “Ogadeen ha soo heshiiyo”. Waxaa la keenay Madoobe, xidig, Yusuf Xassan iyo kuwa kale oo badan.
Fiiro gaar ah: Xasarada Oromia – Somalida bilowgedii, Cabdi-Iley baa lagu diray Oromada, si uu khilaaf uga dhex abuurmo labada qoomiyadood ee dariska ah. ONLF iyo mucaaradka Ethiopia waxay ka midaysnaayeen xukuumadan la rido wax u qarsoonaase lama shaacin, haatan waa la isku dhuftay.
ONLF, Tigreegu waxay ula dhaqmeen si beel ah, si ay uga horkeenaan beelaha Soomaalida, waayo dhulkan kolka la soo dhiciyo waa dhul Soomaaliyeed dhibaato badan Soomaali way la soo martay xiligii ay dawlada ahayd. Beesha Ogadeen oo dhan ONLF, ma aha ee cidii taageersan halganka umbaa ONLF ah.
Gabogabadii ONLF, khalkhal iyo shaki baa taageerayaasheedi la galiyey waxaana loogu talo galay in ay god ku dhacdo. Waxaase looga baahan yahay in ay dhaydo boogaha damqaday. Shirka soo socdan waa in ay kasbataa ururada mucaaradka ah oo dhan, iyada oo ilaalinaysa mabaa,diida hantida u ah dadwaynaha.